आवरण कथा» ओली–प्रचण्ड: संघर्ष कि सहकार्य ? - समसामयिक - नेपाल
आवरण कथा» ओली–प्रचण्ड: संघर्ष कि सहकार्य ?
सौदा र संघर्षको द्विविधामा दुई ठूला वाम शक्ति
संविधान संशोधनमा प्रदेश–५ का पहाडी जिल्लालाई टुक्र्याएर प्रदेश–४ मा गाभ्ने प्रस्तावले नेपाली राजनीति यतिबेला ध्रुवीकृत भएको छ । आर्थिक विकास, समृद्धि र सामथ्र्यको कोणबाट संघीयकरणको बहसलाई निर्देशित गर्न नसक्दाको परिणाम नेपालले भोगिरहेको छ । देश टुक्र्याउन मिल्ने तर जिल्ला टुक्र्याउन नमिल्ने अनौठो राजनीतिक दर्शनबाट संघीय संरचना निर्माण गर्दै छौँ हामी ।
संसारमा संघीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने संघीय शासन प्रणाली मूलत: दुई प्रक्रियाबाट निर्माण भएका छन् । पहिलो, स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू मिलेर (कमिङ टुगेदर) संघ निर्माण भएको छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया यस अन्तर्गतका देशहरू हुन् । दोस्रो, एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरूले विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीलाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक स्वशासनको अधिकार निक्षेपण गर्दा (होल्डिङ टुगेदर) संघीयता निर्माण भएको छ । भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, अस्ट्रिया, साउथ अफ्रिका यसका उदाहरण हुन् ।
संघीयताका अध्येता प्रोफ्रेसर रोनाल्ड वाट्सले अन्डरस्ट्याडिङ फेडरालिजम एन्ड फेडेरेसन भन्ने पुस्तकमा संघीय प्रणाली अपनाएका देशहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो, पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेका अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, जर्मनी र अस्ट्रियालाई उनी ‘परिपक्व संघीयता’को समूहमा राख्छन् । दोस्रो, विगत केही दशकदेखि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै आएका तर राजनीतिक तथा संघीय रूपमा स्थिर नभइसकेका मुलुक जस्तै स्पेन, बेल्जियम, इथोपिया, नाइजेरिया, साउथ अफ्रिका, पाकिस्तान, ब्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टिनाजस्ता देशलाई उनी ‘उदीयमान संघीयता’ भन्छन् । तेस्रो, द्वन्द्वबाट बाहिर निक्लिँदै गरेका मुलुक इराक, कंगो, बोस्निया हर्जगोभिना र नेपाललाई ‘संघीयता उन्मुख’ राष्ट्रका रूपमा हेर्छन् । चौथो, सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकियालाई उनले ‘असफल संघ’को समूहमा राखेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । एकातिर दशकौँदेखि संघीय शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुक पनि संघीय रूपमा स्थिर हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर भर्खरै संघीयता अवलम्बन गरेका लामो द्वन्द्वबाट तंग्रिँदै गरेका देशहरूले सामना गरिरहेका संघीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका चुनौती पनि कम पीडादायक छैनन् ।
नेपाल पूर्ण संघीय मुलुक होइन तर संघीयता उन्मुख मुलुक हो । नेपालले निर्माण गर्न खोजेको संघीय व्यवस्था ‘होल्डिङ टुगेदर’ सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । शक्ति विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरणको सिद्धान्तमा आधारित यो प्रक्रियाबाट संघीय शासन अपनाएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने नयाँ प्रदेशको निर्माण र सीमांकन हेरफेर एउटा नियमित प्रक्रियाकै रूपमा छ । भारतमा सन् १९७५ सम्म जम्मा २२ प्रान्त थिए । पछिल्लो चार दशकमा सातवटा नयाँ राज्य निर्माण भएर २९ वटा पुगिसकेका छन् । अझै गोर्खाल्यान्ड र विदर्भजस्ता नयाँ राज्यको माग यथावत् छ । सन् १९६७ मा १२ वटा राज्यबाट संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा अहिले ३६ वटा राज्य छन् । युरोपको ठूलो संघीय मुलुक जर्मनीमा अहिले १६ वटा राज्य छन् । सन् १९४९ मा जर्मनीले संघीय व्यवस्था अपनाउँदा जम्मा सातवटा राज्य अस्तित्वमा थिए । त्यसै गरी सन् १८६७ मा तीनवटा प्रान्तबाट संघीय शासन प्रणाली सुरु गरेको क्यानडामा अहिले १० प्रान्त छन् ।
विश्व इतिहासले पनि के देखाउँछ भने ‘कमिङ टुगेदर’ प्रक्रियाबाट संघीय व्यवस्था सुरु भएका देशहरू भन्दा ‘होल्डिङ टुगेदर’ प्रक्रियाबाट संघीय व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा नयाँ प्रदेशको निर्माण तथा आन्तरिक सीमांकन हेरफेर छिटो र पटक–पटक भएको छ । संघीय मुलुकहरूले पनि यो वास्तविकतालाई अन्तर्निहित संघीय चरित्रका रूपमा स्वीकारेका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर प्रदेशहरू निर्माण गरियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले वैज्ञानिक आधारबिना आफ्नो पैतृक सम्पत्तिलाई अंशबन्डा गरेजसरी प्रदेशहरू बाँडफाँट गरिदिए । अहिले देखिएको सीमांकन हेरफेरको बखेडाको प्रमुख जड नै यही हो । राजनीतिक दलहरूसँग सात प्रान्त मात्रै किन वा अरू थप वा कम किन हुन सक्दैनन् भन्ने वैज्ञानिक आधार वा तर्क छैन । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले संघीय प्रदेशहरूको संख्या र सीमांकनको तर्कयुक्त आधार पेस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म नयाँ प्रदेश तथा सीमांकन हेरफेरका आवाज कुनै न कुनै रूपमा उठी नै रहनेछन् ।
संघीयता आफैँमा गतिशील व्यवस्था हो । माओवादी विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन हुँदै गुज्रिएको नेपाली राजनीतिले दलीय सहमतिबाटै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता मुद्दामा छलाङ मार्न सफल भएको हो । नेपालले जुन राजनीतिक सिद्धान्तबाट संघीय शासन निर्माण गर्दै छ, त्यसले भविष्यमा थप नयाँ प्रदेशको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना र अवसर पनि हामीलाई दिएको छ ।
यो यथार्थतालाई मनन गर्दै अहिलै नै यति नै प्रदेश हुनुपर्छ वा निश्चित जिल्ला मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाइनुपर्छ वा नभए चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्नु देशलाई थप संक्रमणमा धकेल्नु हो । संविधानले तोकेको समयावधिभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन नहुन सक्छ र देश फेरि नयाँ चरणको राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गर्नेछ । यसले कसैलाई पनि फाइदा हुनेछैन । त्यसैले पहिला संविधान कार्यान्वयनमा गएर पछि तर्क र तथ्यका आधारमा प्रदेशको संख्या घटाउन वा बढाउन र सीमांकन हेरफेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दा राम्रो हुन्छ ।